Ogaden News Agency (ONA) – Warshadaha Sonkorta Itoobiya oo khasaaray 7 Bilyan oo Bir
Warshadaha Sonkorta Itoobiya oo khasaaray 7 Bilyan oo Bir
Warshadaha Sonkorta Itoobiya oo shaqada bilaabay kaliya afar sano kahor ayaa galay khasaare dhaqaale oo aad u baaxad weyn,waxaana sidaas lagu sheegay xisaab xidhkii lasoo saaray sanadkan.
Dad xog ogaal ah kana shaqeeya warshadahaas ayaa warbaahinta u sheegay inay khasaareen warshaduhu 7 Bilyan oo Bir,waxayna intaasi ku dareen inay warshadaha soo gaadheen khasaare laxaad leh oo ay adag tahay siday uga soo kabatan,waxaana la ogaaday inaysan warshaduhu xataa iska bixinin qalab ay soo amaahdeen oo qiimahiisu dhannaa 3 Bilyan oo Bir welina lagu leeyahay.
Sababaha ugu xooga weyn ee lala xidhiidhinayo kicitaanka warshadaha Sonkorta Itoobiya ayaa ah sida ay sheegeen dad xog ogaal in ABAY SAHAY mudadii uu Maareeyaha ka ahaa Warshadaha oo ahayd labadii sano ee u dambaysay qasnada warshadaha laga waayey 800 oo Milyan oo bir,taas oo loo badinayo inuu la baxay ABAY SAHAY.
Khasaarahaas kadib ayuu wasiirka Warshadaha ahna madaxa gudiga Warshada Sonkorta Mr.Axmed Abtow ka codsaday raisul wasaaraha Itoobiya in baadhitaan dagdag ah lagu sameeyo cida iyo sababta ka dambeysa kicitaanka warshadaha Sonkorta,waxayna kicitaankii warshaduhu sababtay inay shaqaale badan ku waayaan shaqooyinkoodii.
Kiciyaha Warshadaha Sonkorta sida la rumaysan yahay oo ah ABAY SAHAY ayaa kamid ah ragii laga fadhiisiyey siyaasada ururka TPLF ee Tigreega wuxuuna kamid ahaa golaha dhexe ee urukaas iyo raga ugu awooda badan xisbigaas iyo siyaasada Itoobiya ba,waxaana shalay loo shegay inuu banaanka ka yahay,arintaas oo laga cabsi qabo inay khilaaf cusub iyo looltan dhalin kara qalalaase siyaasadeed ka dhex abuurto siyaasiyiinta Tigreega ee ku naaxay dhiiga shucuubta ku hoos dulman.